ဘောလုံးချုပ်ကိုင်ခြင်း မှအကောင်းဆုံး ဘောလုံးချုပ်ကိုင်ခြင်း မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
Jin Minng Industrial Co., Ltd. ဦးဆောင်သည် Taiwan ၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ ဘောလုံးချုပ်ကိုင်ခြင်း နှင့် Optimum စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်. ကျွန်ုပ်တို့၏ clients များအာမခံ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တန်းမြင့်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းကို အသုံးပြု. လုပ်ကြံမှုများနေကြပါတယ်။ ဤကျယ်ပြန့်မတူညီကြစက်မှုလုပ်ငန်း applications များအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ ဒါဟာနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီစံချိန်စံညွှန်းများ၏ထုတ်လုပ်သည်နဲ့အလွယ်တကူ client ကိုလိုအပ်ချက်နှုန်းအဖြစ်ကိုယ်ပိုင်နိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့အများစုမှာစျေးနှုန်းယှဉ်ပြိုင်မှာပူဇော်စေ။
ပုံစံ - SW168N-001SL/R
စရိုက်လက္ခဏာတွေ：လေ့ကျင့်ခန်းအတွင်းခြေထောက်ဒဏ်ရာကိုဘယ်လိုလျှော့ချမလဲ?ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားခြေအိတ်များရွေးချယ်ခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်.အားကစားခြေအိတ်တိုင်းတွင်ပွေ့ဖက်ထားသောဖိအားကိုချုံ့ထားပြီးထောက်ခံမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုထပ်ဖြည့်သည်,တစ်ဝက်-cushion Terry ခြေလျင်သည်သင့်အားအပိုသက်ရောက်မှုကာကွယ်မှုပေးသည်.အားဖြည့်တစ် ဦး တည်းသောခြေအိတ်,တောင့်တင်းသောခြေအိတ်များကိုမြင့်မားစွာကာကွယ်ပေးသည်-ဒဏ်ရာအခွင့်အလမ်းတွေကိုလျှော့ချသော stressareas.ထွက်ပေါက်သပိတ်မှောက်အဆိုပါ jacquard ထည်တိုးတိုးအထူ,သငျသညျမြန်နှုန်းမြင့်မှာပြောင်းရွှေ့သောအခါမြင့်မားသောအပေါ်ယံပိုင်းဂုဏ်သတ္တိကိုခိုင်ခံ့စေခြင်းနှင့်ပွတ်တိုက်လျှော့ချသည်.နှစ်ဆဖုံးအုပ်ထားသောကြိုး-သမားရိုးကျဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းညွန်နှစ်ခုကြိုးအားဖြင့်ပတ်ရစ်နေသည်.တစ်ခုက S လှည့်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်,နှင့်အခြား Z ကိုလှည့်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်(အပြင်ဘက်အဖုံးနှင့်အတွင်းပိုင်းအဖုံး)ချောချောမွေ့မွေ့ပါပဲ,ပျော့ပျောင်းနှင့်မြင့်မားသော elasticity.အားကစားနှင့်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ခြေအိတ်နှင့်ခြေကိုက်နာကျင်မှုကိုလျှော့ချရန်မြင့်မားသောသက်ရောက်မှုရှိသည့်နေရာများတွင်မက်စရှူရှန်းနယ်.နက်ရှိုင်းသောဖနောင့်အိတ်ကပ်-ဝတ်ဆင်စဉ်အတွင်းစစ်မှန်သောမထိုက်မတန်ပေးအင်ဂျင်နီယာဖနောင့်အိတ်ကပ်.ခိုင်မြဲစွာဆုပ်ကိုင်နှင့်ခက်ခဲ-ပစ္စည်းဝတ်ဆင်ဂိမ်းထဲမှာခြေအိတ် slippage လျော့နည်းသေချာ.နှစ်သိမ့်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ပွတ်တိုက်အားကာကွယ်တားဆီးဖို့ဒေါက် andmetatarsal အရိုးဒေသများအားဖြည့်နေကြသည်.Embedded Arch အထောက်အပံ့သည်ခြေထောက်ကိုပင်ပန်းနွမ်းနယ်စေသည်.သူတို့က snug fit နှင့်ဖနောင့်မှထောက်ခံမှုမှန်ကန်သောပမာဏကိုပေး,မဟာနှင့်ခြေကျင်း.တစ်ခုချင်းစီကိုခြေလျင်များအတွက်အထူးဒီဇိုင်း-L နှင့် R သည်ခြေအိတ်ပေါ်တွင်မှတ်သားထားသည်-လက်ဝဲနှင့်လက်ျာခြေမသည်.ပျော့ပျောင်းသောကြာရှည်ခံထည်,elastane တည်ဆောက်ပုံနှင့် fit အတွက်နေ့စဉ်တက်ကြွသောလူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်&အားကစားအားကစားအသုံးပြုမှုအမျိုးမျိုးတို့ကို.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bestsportssocks.com/my/soccer-grip-socks.html
အကောင်းဆုံး ဘောလုံးချုပ်ကိုင်ခြင်း ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် ဘောလုံးချုပ်ကိုင်ခြင်း ၏အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊